Inona no hatao aorian'ny fametrahana CentOS 7? Torolàlana haingana. | Avy amin'ny Linux
Salama namana avy FromLinux, araka ny fantatrareo rehetra fa volo tsy milamina aho ary matetika mametraka distro ho an'ilay biby mba hanomezana torolàlana ho anao. Saingy mandany ezaka be, asa sy fotoana be dia be izany ary mandreraka ny fametrahana indray ny rafitra isam-bolana :).
Rehefa voalazako ireo voalaza etsy ambony ireo dia nanapa-kevitra aho fa hijanona amin'ny rafitra fototra anaovako azy fotsiny. Nisafidy ho rafitra fototra a CentOS 7 amin'ny Gnome-Shell satria io tontolo iainana io no mamokatra indrindra fantatro.
Alohan'ny hanombohana dia manome anao sary vitsivitsy aho:
Andao hanomboka hanomana ny rafitra vaovao isika.
Toy ny faka ampiharintsika
fanavaozana ny && yom autoremove && fametahana ny laharam-pahamehana plugin-yum
yum to install epel-release
Ampidinin'izy ireo ireto .rpm ary apetrany:
Ao amin'ny /etc/yum.repos.d ary manitsy ireo repo rehetra miseho ao amin'ilay lahatahiry izy ireo ary manampy ireto laharam-pahamehana manaraka ireto hampiasaina amin'ny faran'ny trano fitehirizana tsirairay:
laharam-pahamehana = 1 ho an'ny CentOS-Base.repo, laharam-pahamehana epel.repo = 10 ho an'ny nux-dextop.repo, adobe-linux-x86_64.repo
# CentOS-Base. Tokony hampiasa izany ianao amin'ny fanavaozana CentOS # raha tsy misafidy fitaratra hafa ianao. # # Raha toa ka tsy mandeha aminao ny lisitry ny fitaratra = raha miverina ianao dia azonao atao ny manandrana ny tsipika voamarika baseurl = fa tsy. # # [base] name = CentOS- $ releasever - Base mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ releasever & arch = $ basearch & repo = os & infra = $ infra # baseurl = http: / /mirror.centos.org / centos / $ releasever / os / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = fisie: /// sns / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 laharam-pahamehana = 1 # fanavaozana navoaka [fanavaozana] anarana = CentOS - $ releasever - Fanavaozana ny lisitra = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ releaseer & arch = $ basearch & repo = fanavaozana & infra = $ infra # baseurl = http: // mirror .centos.org / centos / $ releasever / fanavaozana / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = rakitra: /// sns / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 laharam-pahamehana = 1 # fonosana fanampiny izay mety mahasoa [extra] anarana = CentOS- $ releasever - Extras mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? Famotsorana = $ releasever & arch = $ basearch & repo = extra & infra = $ infra # baseurl = http: / /mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/ gpgcheck = 1 gpgkey = fisie: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 laharam-pahamehana = 1 # fonosana fanampiny izay manitatra ny fiasan'ny fonosana efa misy [centosplus] n ame = CentOS- $ releasever - Plus mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ releasever & arch = $ basearch & repo = centosplus & infra = $ infra # baseurl = http: //mirror.centos. org / centos / $ releasever / centosplus / $ basearch / gpgcheck = 1 azo atao = 0 gpgkey = rakitra: /// sns / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7
Raha vantany vao novaina ireo repo voalaza etsy ambony, dia manohy izahay:
mametaka java-1.7.0-openjdk icedtea-tranonkala thunderbird firefox libreoffice-langpack-es filezilla p7zip unzip zip gimp kernel-devel dkms telnet mc wget htop ntfs-3g hametraka gstreamer-plugins-tsara gstreamer-plugins-bad gstreamer- plugins-ugly yum groupinstall "Fitaovana Fampandrosoana" "Tranombokim-pampandrosoana" mametaka vlc lm_sensors unrar foomatic sensor-mamantatra
Ary vonona namana. Miaraka amin'izany no anomanana ny CentOS 7 antsika 🙂
Miarahaba antsika tratry ny taona vaovao 2015.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Inona no hatao aorian'ny fametrahana CentOS 7? Torolàlana haingana.
tuto tena tsara :), manararaotra manontany aho hoe tena marina ve fa hisy famotsorana i centos?
Hanao famotsoran-keloka ve ianao?
MaigoInu dia hoy izy:
Ao amin'io lahatsoratra io dia misy rohy mankany amin'ny lisitra mailaka CentOS.
Ny azoko dia ny hanaovan'izy ireo an'i Debian rehefa mamoaka ny version 7.x ohatra.
Valio amin'i MaigoInu
Tsia, na i CentOS na i RHEL dia tsy ary tsy ho Rolling Release.
Ny efa vita dia ny Rolling ny fampitam-baovao. Mamelà ahy hanazava… Hatramin'izao dia tsy miova ny haino aman-jery fametrahana hatramin'ny nivoahan'ny kinovan'ny CentOS. Noho izany, raha vantany vao vita ny fametrahana dia mila mametraka megabytes an-jatony na gigabytes aza ianao amin'ny fanavaozana voalohany.
Ankehitriny ny zavatra hataonao dia ampidiro ao amin'ny media fampidirana ireo fanavaozana rehetra, noho izany ny olana voalohany dia momba ny megabytes.
Rehefa avy namaky ity torolalana ity aho dia iriko ny mametraka Centos, fa tsy hanao izany aho. Mavesatra loatra amiko. Maninona raha manamboatra torolàlana hametrahana Centos ho simba?. Saika ny zava-drehetra hitako tao amin'ity fizarana ity dia amin'ny teny anglisy.
Raha ny fanazavan'i Peter, inona no ataon'ny zazalahy toa anao amin'ny toerana toa ny Repoblika Tseky? Ireo zazavavy. . . Manao ahoana ianao?
Salama tsara ireo zazavavy eny, fa ny antony mahatonga ahy eto dia satria manana asa aho izay mahatonga ahy handeha eo anelanelan'ny Repoblika Czech sy Espana: D.
Raha ho an'ny mpitari-dalana, ity dia torolàlana ho an'ny tsy salama ... Mora, mazava ary haingana: D.
servos dia hoy izy:
Tsy misy fisalasalana fa ny ilainao dia ny ServOS, ampidino ny kinova 2.0 izay miorina amin'ny CentOS 7 ary manana gnome3 amin'ny alàlan'ny default efa vonona hampiasaina sy natao ho an'ny Desktop, dia hahagaga anao izany. Famotsoran-keloka ity ary manana fanohanana hatramin'ny 2024 🙂
Ny liveCD dia natao ho an'ny Servers satria ny fotony ihany no misy azy ary mitazona 700MB ny ISO
Ny liveDVD no misy ny programa ilaina rehetra hanombohana miasa amin'ny solosaina findainao na PC ary mora be ny mametraka azy! 🙂
ampidiro ny fampidinana http://www.serv-os.net ary andramo! aza manenina! 🙂
Torohevitra tsara, na dia tiako ho anao aza ianao manazava momba ny fomba fanoloana ny systemd amin'ny init hafa.
PS: Mizaha toetra ny findaiko izay navotako tsy hohadinoiko.
Tratry ny taona 2015 voalohany indrindra :). Mampalahelo fa tsy azo esorina ao amin'ny CentOS 7 ny systemd satria ampiharina amin'ny zavatra rehetra.
Na dia izany aza, mila manontany tena ianao raha tena ratsy tokoa ny systemd satria raha ny fahitako ny olana efa nalamina (farafaharatsiny ao amin'ny CentOS).
lmad dia hoy izy:
Raha tsy tianao ny systemd na maniry zavatra hafa misimisy kokoa, tsy manan-tsafidy ianao afa-tsy ny hampiasa fizarana hafa (debian ohatra), tsara ny ataoko manokana amin'ny systemd amin'ny birao fa amin'ny mpizara no ampiasako ny init nentim-paharazana, mba hisorohana ny fifindra-monina.
Mamaly an'i lmad
ahoana ny fametrahana Centos ho mpizara?
Misintona ny cd farafahakeliny ianao, apetraho ary voila. Hanana CentOS tsy misy X ianao ary ampy fotsiny ho an'ny mpizara.
Andramako io andro io, tena tsara, nanandrana nanala ny networkmanager aho satria toa be loatra ny famonoana IP static nefa nandrava ny rafitra, tsy misy daemon tambajotra toa ny centos 6 intsony? Systemd dia misy ifandraisany amin'izany?
@dhunter dia tsy mila manala fonosana ianao mba hahamora azy, manamboatra ny interface ary raha namboarina indray mandeha, avy amin'ny terminal;
sudo systemctl tsy mankato ny NetworkManager
na toy ny taloha dia mifanaraka ihany koa izy ireo:
sudo chkconfig NetworkManager tsy mandeha
izao manaraka izao:
sudo systemctl mamela tambajotra
tambajotra chkconfig amin'ny
avereno indray ary mandehana
Azonao atao ny manohy mampiasa ny serivisy .—- atombohy na avereno ny baiko raha mifanaraka izy ireo 🙂
Jose Cuervo dia hoy izy:
Valiny tamin'i Jose Cuervo
Izay notadiaviko fotsiny.
onai dia hoy izy:
Manao ahoana ianao amin'ny centos 7?
Tamin'ny lahatsoratra iray hafa dia nanamarika ianao fa raha ny hevitrao, dia mandeha tsara kokoa noho ny Fedora 21.
Ka nanontany anao aho raha afaka mametraka vmware 11 sy gns3 1.2 amin'ny centos 7.
Te hahafantatra hametraka azy xD aho
Talohan'ny nampiasako ny openuse 13.2 ary nihazakazaka ireo programa 2 ireo fa rehefa virtoaly
Sary 3 tao amin'ny vmware no nahantona ny laptop-ko indraindray. Manana ondrilahy 12Gb sy processeur i7 aho.
nitady tao amin'ny google hitako fa ny cache ram dia niakatra be ho an'ireo sary ireo tao amin'ny vmware, nampiasa kde aho ary
Sendra ny lxde aho izay nihazakazaka tsy nisy olana ireo sary (ny ramatrana tsirairay dia nanana ondrilahy 2 gb).
Fa maninona no mitranga izany? XD satria maivana kokoa ny birao iray? Tokony hanana RAM be dia be aho satria manana 12GB fa ny cache ram izay vokariny dia nakany amin'ny xD ambony.
Niala tamin'ity lohahevitra ity aho haha, te-hanontany anao aho hoe manao ahoana ianao amin'ny centos 7.
; misaotra tamin'ny lahatsoratro mamaky xD maromaro aho, manao ahoana ny freebsd-nao? handeha tsara amin'ny solosaina findaiko ve izany? Manana ireo programa lazaiko ireo ve ianao? haha dia navelako ilay lohahevitra xD
Mamaly an'i onai
Salama, tena tsara ny CentOS 7. Ho afaka hametraka ireo programa roa ianao ary misy fampahalalana marobe momba izany.
Raha ny FreeBSD dia azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetra. Tsy maninona na amin'ny serivera io, PC na solosaina finday… Mazava ho azy fa tsy mahazo aina izany amin'ny PC sy ny solosaina findainy. Manoro hevitra ny hampiasa ny FreeBSD amin'ny servero ihany aho.
weyland-yutani dia hoy izy:
Manova distro bebe kokoa ianao noho ny palitao Petercheco. Marina fa tsy mahazo aina kokoa ny Freebsd eo amin'ny birao, fa ny ezaka fanampiny tokony hatao dia mihoatra ny valisoa. Freebsd dia manana teknolojia mandroso tsy misy fetra, ohatra zfs sy Dtrace izay tena mahagaga. Ary maninona raha lazaina an'io, tsy manana ilay andrana antsoina hoe lennartOS (oops, azafady, systemD xD).
Valio i weyland-yutani
Salama @ weyland-yutani,
Taona falifaly alohan'ny zavatra hafa rehetra: D. Tsy milaza aho hoe ratsy ny FreeBSD ary notehiriziko tamin'ny serivera satria haingana dia haingana ny fampiharana azy amin'ny serivera ary farafaharatsiny farafaharatsiny mba "direct" kokoa noho ny amin'ny Linux mpiray tam-po aminy ary koa amin'ny sehatra hafa rehefa tonga ho an'ny filaminan'ny hafa.
Saingy amin'ny pc sy solosaiko findainy dia nanjary tsy mahazo aina ianao satria tsy manana Gparted, zavatra mitovy amin'ny NetworkManager ary tsy mitombina izany amin'ny wifimgr fotsiny na noho ny olana tsy maintsy hametrahana kapila USB matetika. Tamin'ny voalohany dia tsy niahiahy momba izany aho, fa taorian'ny volana voalohany tamin'ny solosaina finday dia lasa adala aho: D.
Mihaona amiko ny CentOS 7 amin'ny zavatra rehetra ary tsy maintsy lazaina ny zava-drehetra. Mahavita tsara ny asany izy. Raha ny systemd ... Ralehilahy, tsy hoe tiako be io, fa ao amin'ny RHEL / CentOS dia mandeha tsara daholo ny zava-drehetra ary tsy nahita zavatra hafahafa tamin'ny fiasan'ny rafitra aho.
Azoko tsara ny toerana misy anao. Izaho, na izany aza, dia mpampiasa mafy Arch Linux nandritra ny taona maro, ny Arch taloha talohan'ny fahatongavan'ny systemD sy ny fanovana ny / usr. Izany no mahatonga ahy hahatsapa ho toy ny trondro anaty rano ao Freebsd, satria misy itovizany amin'ny Arch taloha. Tsy mampaninona ahy ny mampiasa ny terminal amin'ny zavatra sasany, toa ny kapila miakatra, mandoro DVD sns ... inona koa, Tiako izany. Misaotra an'i Freebsd, mahazo aina miaraka amin'ny rindrambaiko maimaimpoana indray aho. Etsy an-danin'izany, ny fahazoan-dàlana BSD dia tsara kokoa amiko noho ny GPL. Fa hey, izany no lohahevitra hafa ..
Tratry ny taona ho anao koa.
Raha manao virtoaly amin'ny virt-manager, libvirt ary qemu-kvm ianao dia heveriko fa manana vintana tsara kokoa ianao, biby ny vmware.
Biby VMware momba ny fanjifana harena?.
Izay mpitari-dalana ahazoana aina sy mora ampiasaina ho anao.
Gandalf dia hoy izy:
Salama maraina, misaotra tamin'ny fanampiana voalohany. Ny zavatra faharoa holazaina aminao fa rehefa manandrana aho:
yum groupinstall "Fitaovana Fampandrosoana" "Tranomboky Fampandrosoana", azoko ity:
Plugins misy entana: fastmirror, langpacks
Tsy misy rakitra vondrona napetraka.
Mihazakazaha angamba: ny vondrona yum dia manamarika niova fo (jereo lehilahy yum)
Mamaky ny hafainganam-pandehan'ny fitaratra avy amin'ny cache hostfile
* fototra: mirror.tedra.es
* fanampiny: mirror.tedra.es
* fanavaozana: mirror.tedra.es
Fampitandremana: Ny fampandrosoana ny vondrona dia tsy manana fonosana hapetraka.
Fampitandremana: tsy misy ny tranombokim-pampandrosoana ho an'ny vondrona.
Mihazakazaha angamba: ny vondrona yum dia manisy marika (jereo man yum)
Tsy misy fonosana ao amin'ny vondrona angatahina azo apetraka na havaozina
Tiako izany raha azonao omena tanana aho.
Valiny tamin'i Gandalf
Salama, tsy misy zavatra mitranga. Misy fahasamihafana misy eo amin'ny Fedora sy CentOS… Ny «Library Library» dia tsy misy ao amin'ny CentOS sy ny Fedora.
Dia izay. Ny "Fitaovana Fampandrosoana" dia mametraka irery ny zava-drehetra.
Angel-2021 dia hoy izy:
Misaotra betsaka amin'ny vaovao rehetra. Tsara izany, tohizo!
Valiny amin'ny Angel-2021
Raspberry pi: fahalalana NOOBS (ny fomba fametrahana distro amin'ny Raspberry pi)
Mampiavaka ny Zuum P60